I-Glutathione: Izidakamizwa zakamuva ze-Anti-ukuguga ne-Whitening Izidakamizwa & Supplements
I-Glutathione: Izidakamizwa zakamuva ze-Anti-ukuguga kanye ne-whitening Drug & Supplements ku-2020
I-Glutathione, noma ngabe imijovo ye-glutathione, ukhilimu we-glutathione noma uhlobo lwayo ngokwemvelo, kuyiprotheni elakhiwe ngomzuzu elinama-amino acid amathathu, okungukuthi i-cysteine, glutamate, kanye ne-glycine. Yize i-glutathione ingumkhiqizo wesibindi wemvelo, futhi iyinto esemqoka yamakhemikhali kuzithelo, inyama nemifino.
I-Glutathione ihanjiswa ngomlomo, ifakwa ngaphakathi, noma ngomjovo ukuze iphindise izinga layo emzimbeni ngezinqubo nezinzuzo zemvelo ezihlukahlukene. Umsebenzi we-Glutathione ubamba iqhaza elibalulekile ekuvuseleleni izivikeli mzimba, ekwelashweni kwezifo zamaphaphu, ekutholeni usizo lwe-chemotherapy, kanye nokuvimbela i-anemia, phakathi kweminye imisebenzi.
Ngabe u-Glutathione usebenza kanjani?
Umsebenzi we-Glutathione uza ngokulandelana kwezinqubo eziningi ezenzeka emzimbeni womuntu ukwethula izinzuzo ezahlukahlukene ze-glutathione. Lezi zinqubo zibandakanya ukuphendula komzimba ukulungiswa nokwakhiwa kwezicubu kanye nokufakwa kwamaprotheni nokusebenza kwamakhemikhali.
Futhi, eyaziwa ngamandla ayo avelele we-oxidation, i-glutathione ithuthukisa indlela umzimba womuntu osebenzisa futhi iphinda isebenze kabusha ama-oxidants anjengevithamini C no-E, CoQ10 kanye ne-alpha lipoic acid.
Iziphi izinzuzo zeGlutathione emzimbeni?
Ngomthamo ofanele we-glutathione wokunezela noma ukukhiqizwa okwanele emzimbeni, umuntu umi ngamathuba aphezulu okuthola izinzuzo zezempilo ezahlukahlukene ngenxa yokunikezwa okwanele kwe-molecule emzimbeni. Ukhiye izinzuzo ze-glutathione zihlanganisa:
Ukucindezelwa kwe-Oxidative kuyisici esikhulu esinomthelela ekugugeni nasekuguleni okuhlukahlukene. Lokhu kwenzeka lapho ukukhiqizwa kwama-free radicals kuphakama amandla omzimba okulwa nale radicals yamahhala.
Lapho kwenzeka ukungalingani, ama-radicals mahhala ngokweqile alimaza amaseli omzimba, okwenza ubudala obuningi basheshe futhi bathambekele ezifweni ezahlukahlukene. Ezinye zezifo ezingenzeka ngenxa yokuxinwa ngokweqile kwe-oxidative zifaka phakathi isifo sikashukela, umdlavuza, i-asthma, isifo samathambo kanye nokuphazamiseka kokuvuvukala.
Ngakolunye uhlangothi, lapho umzimba unamazinga okulwa nama-antioxidants anjenge-glutathione, uyakwazi ukulwa nama-oxidants akhona manje. Ngenxa yamandla ayo we-antioxidative kanye nekhono lokuba khona kumaseli womzimba ekujuleni okukhulu, umsebenzi we-glutathione isebenza kakhulu ekusizeni umzimba ukuthi ulwe namakhemikhali ahlukahlukene nemithelela yawo elimazayo.
IGlutathione idedela izinto ezinobuthi emizimbeni yethu. Ngenxa yokudla nezinye izinto ezidliwayo abantu, imizimba yabo ithambekele kobuthi obuthinta kabi izitho zabo nezinqubo zebhayoloji. Ngaphandle kwalokho, umzimba uqobo ungakhiqiza izinto ezinobuthi ngenkathi wenza izinqubo ezijwayelekile.
Isibonelo, esigabeni sokugcina senqubo yokukhiqiza amandla, umzimba ungakhiqiza i-superoxide. Uma ucabanga nge-superoxide inamanani amaningi we-elektroni, angaba ubuthi emalungeni eseli, iDNA, mitochondria, phakathi kwezinye izinto zomzimba eziseduze nayo.
Ngenhlanhla, lapho umzimba wakho unamazinga anele awo, glutathione ukukhipha ubuthi emzimbeni futhi ihlukanise i-superoxides, ivikela umzimba emiphumeleni yayo enobuthi. Ngaphezu kwama-superoxides, ama-glutathione aqeda futhi anciphise ezinye izinhlobo eziningi zamangqamuzana anobuthi angaba khona emzimbeni wakho.
Isikhumba 3.For futhi anti-ukuguga
Wonke umuntu ufuna ukuba nesikhumba esiphelele. Ngeshwa, ngenqubo yokuguga, ukushintshwa kwama-hormone, ezinye zezinto zokuphila njengokudla okungenampilo kanye nokuzivocavoca umzimba, isikhumba sakho singaphambana nalokho obekulindelwe. Okubi nokho, imikhiqizo ye-skincare elwa nokuguga efana nama-moisturizer, okhilimu nezinsizwa kungavela kungabi nalutho ekuzameni kwakho ukufeza isikhumba esingenaphutha.
Uma leso simo sakho samanje, kungakuhle ukuthi uzame glutathione kwesikhumba ngcono.
ukuzama. I-Glutathione yesikhumba idlala indima ebalulekile emisebenzini yamaselula kanye ne-mitochondrial, futhi, ngakho-ke, inamandla okukhuthaza ukuphulukiswa kwamangqamuzana omzimba alimele anikela emaphutheni akho esikhumba.
Ngaphandle kwalokho, i-glutathione isekela ukwenziwa kabusha kwamaseli womzimba, futhi lesi yisinyathelo esibalulekile ekubuyiselweni kwempilo yakho kwesikhumba.
Izifundo ezahlukahlukene zesayensi zichithe ikhono le-glutathione lokugqokwa kwesikhumba nokunciphisa ukubukeka. Futhi, i-antioxidant iye yatholakala ukuthuthukisa ukuqina kwesikhumba. Umphumela ojwayelekile ungumuntu obukeka emncane onetoni enempilo nenhle yesikhumba nokuthungwa.
Ngobudala obukhulile, abantu bahlangabezana nezinkinga zememori njengomphumela we-neurodegeneration. Lokhu kwenzeka lapho inani elikhulu lobuchopho bezinzwa lilimala noma lifa. Ngenxa yalokhu, ubuchopho buyancipha futhi bungakwazi ukusebenza ngokugcwele.
Ngeshwa, abantu abakwazi ukubalekela imiphumela enjalo yenqubo yokuguga. Ngakolunye uhlangothi, futhi ngenhlanhla, i-glutathione supplementation yokuthuthukisa izinga le-glutathione emzimbeni ingasiza kakhulu ekuhlehliseni noma ekunciphiseni inqubo yokuguga kanye nezimpawu nezimpawu ezihambisana nazo. I-antioxidant inciphisa futhi inciphise isilinganiso sokulimala kwezicubu ze-neural, futhi isize ukulungiswa kwezicubu ezilimele ze-neural.
Ocwaningweni olwenziwe ngo-2017, abaphenyi bathola ukuthi i-intranasal glutathione inegalelo ekwenzeni ngcono kwe Izimpawu ze-Alzheimer's phakathi kweziguli ezinesimo sengqondo.
I-Glutathione antioxidant kubalulekile futhi impilo inhliziyo. Lokhu phakathi kwezinzuzo ezibalulekile ze-glutathione, futhi kunyukela phansi kwikhono lamangqamuzana e-glutathione ukumelana ne-"lipid oxidation" emzimbeni.
Isigaba sokuqala kwanoma yisiphi isifo senhliziyo sibonisa nge-plaque arterial ezindongeni ze-artery. Ngemuva kwalokho, lesi sifo siyaphuka, sibangele ukuphazamiseka kokugeleza kwegazi. Ngenxa yalokho, kuba nesifo senhliziyo noma unhlangothi.
Ngenhlanhla, lapho une-glutathione eningi eyanele emzimbeni wakho, i-antioxidant isebenza ngokubambisana ne-enzyme eyaziwa ngokuthi yi-glutathione peroxidase ukuze ingasebenzi ama-peroxinitrites, ama-peroxide, ama-radicals mahhala, kanye ne-superoxide. Uma kungalawulwa, wonke la makhompiyutha aba nomthelela ku-lipid oxidation ethinta kabi inhliziyo yakho. Ngakho-ke, i-glutathione izuzisa inhliziyo yakho ngokuyivikela kumonakalo ongavela ngenxa yokuba khona kwezihlanganisi emzimbeni wakho.
Ukuvuvukala kwe-Glutathione inzuzo yokusiza kungenye into eyenza ukuthi i-glutathione idume. Cishe noma yikuphi ukugula okungamahlalakhona, kufaka phakathi isifo sikashukela, umdlavuza kanye nesifo senhliziyo, kubonakaliswa ukuvuvukala.
Ukuvuvukala kuvamile nasezindaweni zomzimba ezilimele noma eziseduzane. Yize izimpendulo zokuvuvukala zivame ukuba yingxenye yenqubo yokwelapha, kwesinye isikhathi zingaphikelela ngokungadingekile isikhathi eside, zibangele isizathu sokuxaba. Lapha yilapho inzuzo yokusiza ukuvuvukala kwe-glutathione iza khona okulusizo.
Ucwaningo oluhlukahlukene lubonisa ukuthi i-glutathione supplement noma i-glutathione ekhiqizwa ngaphakathi emzimbeni ilawula ukwanda nokuncipha kokuvuvukala njengoba impendulo yomzimba ifuna. Ngokumangazayo, ama-molecule we-glutathione afinyelela lokhu ngokuthonya amangqamuzana amhlophe omuntu. Njengoba kunje, bayakwazi ukulawula ukuvuvukala okungamahlalakhona.
Ukudla kwe-Glutathione noma isengezo se-glutathione futhi unikeze umzimba wakho ngama-molecule we-glutathione anele ukukhulisa amasosha akho omzimba. Ngohlelo lokuzivikela lomzimba oluqinile, umzimba wakho ungalwa namagciwane ahlukahlukene wezifo ngokuphumelelayo, ngenxa ye-glutathione vitamin c enokufana ekusekeleni amasosha omzimba.
Ngokusho kwezifundo zesayensi, ama-glutathione asebenzayo athuthukisa ukusebenza kwamaseli amhlophe njengababulali bemvelo kanye namaseli we-T. Ngokuqina, amaseli we-T akhiqiza inani eliphakeme lezinto ezibhekene nokutheleleka kwamagciwane kanye namagciwane. Lezi zinto zifaka i-interferon-gamma kanye ne-interleukins-2 ne-interleukin-12.
Abaphenyi ocwaningweni olulodwa bathola ukuthi i-glutathione antioxidant yathuthukisa amandla amaseli wemvelo wokubulala ukubulala izinto ezingama-200 ngama-XNUMX% ngemuva kwezinyanga eziyisithupha zokusebenzisa isengezo se-glutathione. Ngaphandle kwalokho, ukudla kwe-glutathione kanye nama-supplements abonakala esiza kakhulu ekulweni nama-macrophages ukulwa ne-Mycobacterium isifo sofuba. Isifo sofuba iMycobacterium yisigciwane esiholela kwesifo sofuba.
Ukutheleleka okufana negciwane le-Epstein-Barr, izifo zeLyme ne-hepatitis kungacindezela amasosha akho omzimba. Kodwa-ke, ngokuhlinzekwa okwanele kwe-glutathione antioxidant, amasosha omzimba angamelana ngempumelelo nomphumela wokucindezela kwezifo ezinjalo.
Abaphenyi baphakamisa ukuthi kunokuhlangana okuqondile phakathi kwe-autism kanye namazinga aphansi we-glutathione. Lokhu kulandela ubufakazi obukhombisa ukuthi izingane ezi-autistic zinamazinga aphansi we-glutathione njengoba ziqhathaniswa nezingane ezingenawo umthelela.
Ngenhlanhla, ngomthamo ofanele we-glutathione futhi unamathela kwisengezo, izingane ezine-autism zingaba ngcono. Ucwaningo luka-2011 lukhombisa ukuthi izithasiselo zomlomo we-glutathione noma imijovo ye-glutathione inganciphisa imiphumela ethile ye-autism.
Umdlavuza we-Glutathione inzuzo kungenye into eyenza ongoti bezempilo bagcizelele ukubaluleka kwe-glutathione eyanele emzimbeni womuntu. Ngokusho kocwaningo oluningi, lelo khono lokuvimbela umdlavuza we-glutathione liyabonakala. Lezi zifundo ziphakamisa ukuthi inqubo ye-glutathione isiza ekuvimbeleni umdlavuza ngokuqhubeka komdlavuza.
Kukhona futhi omunye umdlavuza we-glutathione. Abanye ochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo basebenzisa imijovo ye-glutathione ezigulini ezinomdlavuza njengendlela yokuvimbela imiphumela embi yamakhemikhali.
Abantu abanenkinga yokukhuluphala kwesisu noma ukukhuluphala ngokweqile bangakwazi futhi ukufeza izinhloso zabo zesisindo ngokudla ukudla kwe-glutathione noma ngokuthatha i-glutathione supplement. Ezimweni eziningi, ubuthi kanye nama-free radicals avela ekushayweni kanzima kwe-carb noshukela yimbangela enkulu yokukhuluphala namafutha esisu.
Ukusetshenziswa ngokweqile kwalokhu kwalawa amabili kwenza umzimba ugcine amafutha amaningi futhi ushise amakhalori ambalwa. Ngenxa yalokhu, uthola isisindo esithe xaxa, futhi mhlawumbe isisu sakho sizwa ukunqwabelana kwamafutha aphezulu. Uma kushiywe kunganakekelwa, ukukhuluphala kungadala izifo zokuvuvukala ezinomdlavuza.
Ngenhlanhla, imijovo ye-glutathione iyasebenza njengamaVithamini D, B12 no-D ekusizeni umzimba ukukhipha ubuthi. Imishini ye-Glutathione isekela umzimba ekushiseni amakhalori namafutha, ngaleyo ndlela ikhuthaze kwesisindo kanye nesimo esihle somzimba.
I-10.For Peripheral Vascular Disease
I-Peripheral Vascular Disease yisimo sempilo esidalwa ukuvalwa kwemithambo yegazi. Ithinta kakhulu imilenze. I-Glutathione ingakusiza ukuthi ugweme lesi sifo ngokwenza ngcono ukujikeleza kwegazi emzimbeni wakho wonke.
Uma usunaso lesi sifo, glutathione ngomlomo noma ngomjovo ukuphathwa kungadambisa izimpawu ngenxa yokugeleza kwegazi okuthuthukile. Ngokubambelela kumthamo ofanele we-glutathione, kuyindaba nje yesikhathi ngaphambi kokuthi uqale ukuhamba ungabuzwa buhlungu.
Ukusebenza kwemidlalo nakho kuphakathi glutathione isebenzisa. Ucwaningo luthole ukuthi i-glutathione ingathuthukisa ukusebenza komsubathi uma esebenzisa isengezo se-glutathione ngaphambi komsebenzi wezemidlalo.
Kokunye ukuhlola, amadoda ayisishiyagalombili anikezwa i-1,000 XNUMX mg ye-glutathione ngaphambi kokuqala umdlalo wokuzivocavoca. Amanye amadoda asetshenziswe njengabahlanganyeli ocwaningweni afakwa ku-placebo.
Ekuphothulweni kokuzivocavoca kwezemidlalo, abacwaningi baphawula ukuthi iqembu elithole i-glutathione supplement lenze kangcono kakhulu kuneqembu le-placebo. Owedlule wabhekana nokukhathala okuncane kanye nenani eliphansi le-lactic acid ngokuqhathaniswa nelokugcina. Imvamisa, amazinga aphezulu e-lactic acid emzimbeni akhulisa ukukhathala, anciphise umfutho wegazi futhi abangele ukuqaqamba kwemisipha nezinkinga zokuphefumula.
I-Glutathione powder esetshenziswelwe ukujovwa noma ukusetjenziswa okungasebenziseka ivikela umsubathi ezindabeni ezinjalo. Lokhu kuyabasiza ukuthi benze kangcono ekusebenzeni kwabo nemincintiswano.
12.Kuba isifo sikashukela
Ezimweni eziningi, isifo sikashukela noma ushukela wegazi ophakeme oxhunyaniswa nokushoda kwe-glutathione
emzimbeni womuntu. Amazinga kashukela aphezulu angadala ukucindezela kwe-oxidative okuholela ekulimaleni kwezicubu.
Njengoba abantu abanjalo benesifo sikashukela bangathola impumuzo ephawuleka lapho bebhekana nokushoda kwabo kwe-glutathione. Isixazululo esisebenzayo kulokhu kuthuthukiswa okwenziwe ngomlomo kwe-glutathione ngokuthatha ukudla kwe-glutathione noma isengezo se-glutathione. Ngaphandle kwalokho, imijovo yama-glutathione nayo ingasetshenziswa ukulungisa ukusilela kwe-glutathione.
13.For Parkinson's syndrome
Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi ukugcina inani elanele le-glutathione emzimbeni kungenzeka kube nomthelela ekukhululeni kwezimpawu zesifo sikaParkinson. Lesi sifo sithinta ubuqotho nokusebenza kohlelo lwezinzwa oluphakathi, okwenza umuntu abe nezimpawu ezinjengokuthuthumela kanye nokuqina kwamalunga.
Abaphenyi beza nokutholakele okubonisa ukuthi ukusebenza kwe-glutathione kungaba yindlela yokwelapha yokudambisa izimpawu ze Isifo sikaParkinson. Kodwa-ke, abukho ubufakazi obanele bokufakazela ukuthi ukuxhaswa ngomlomo kwe-glutathione kungaba ephephile futhi kusebenza kulokhu. Ukuqhubeka kocwaningo kuyaqhubeka ukuthola ukuthi kusebenza kangakanani nokuphepha kokufakwa ngomlomo kwe-glutathione.
Ukuba yi-oxellant ebalulekile ye-interellular, ukhilimu we-glutathione ungakhulisa impilo yezinwele zakho. Ukukhululeka kokuvuvukala kwe-Glutathione kuyinzuzo enkulu ukuthi labo abathola ukuvuvukala kwesikhumba okuholela ekwazisweni okungenazinwele.
Ngaphandle kwalokho, uma ufuna ukugwema ukungcungwa izinwele zakho, udinga ukuqinisekisa ukuthi ugcina amazinga we-glutathione enempilo emzimbeni wakho. ucwaningo lukhombisa ukuthi ukusweleka kwe-glutathione kukhuthaza ukwenziwa kweenwele. Indlela ye-glutathione yokufeza lokhu ifaka ukuvimbela ukucindezelwa kwe-oxidation ngokusebenzisa ukukhipha izidumbu nokungathathi hlangothi kwama-oxidants.
Obani abadinga iGlutathione? Uyini umthamo ojwayelekile?
Wonke umuntu udinga i-glutathione yokusebenza kahle komzimba, ukuvikelwa kwezifo futhi ubukeke uphilile futhi uthandeka.
Kodwa-ke, abantu abasha abanokuntuleka kwe-glutathione nalabo asebegugile badinga ukunakekelwa kwe-glutathione ukugwema noma ukuzwa impumuzo yezimpawu / imithelela yokuntuleka. Bangathatha izithasiselo ze-glutathione ngomlomo noma ngomjovo.
Okwamanje, abukho ubufakazi obanele besayensi bokuthola umthamo ofanele we-glutathione. Kodwa-ke, abacwaningi bahlongoza ngokungakhethi ukuthi kuthathwe umthamo othile we-glutathione wezimo ezithile zezokwelapha. Lawa manani ancike ezicini ezahlukahlukene ezinjengobudala, ubulili kanye nomlando wezokwelapha womuntu. Ngakho-ke, umthamo we-glutathione wehluka kusuka komunye umuntu kuya komunye, ngisho naphakathi kweziguli ezinesimo sezokwelapha esivamile.
Ungayikhulisa kanjani iGlutathione yethu?
Kunezindlela ezahlukahlukene ongalithuthukisa ngazo izinga le-glutathione emzimbeni wakho. Uma kwenzeka ungenakho ukuntuleka kwe-glutathione enzima, ukudla ukudla okugcwele i-glutathione kufanele kukusize unqobe ukusilela. Okunye kokudla ongathembela ukuthi uzokwenzela le njongo kufaka imifino (amakhabishi, isipinashi, i-broccoli, amahlumela amaBrussel), ama-walnuts, utamatisi, ikhukhamba, ushizi, ugalikhi nenyama esanda kulungiswa. Ucwaningo lukhombisa ukuthi lokhu kudla kucebile ngama-glutathione.
ukuphuza amanzi amaningi ngokungaguquguquki (cishe ama-ounces angama-64 nsuku zonke), ukulala amahora angama-7 kuye kwayi-8 nsuku zonke / ubusuku bonke, ukugwema ukucindezelwa, nokwenza izivivinyo zomzimba okungenani izinsuku ezinhlanu njalo ngeviki kuzosiza umzimba wakho ukukhuphula umthamo wawo wokukhiqiza we-glutathione.
Enye indlela yokwanda kwezinga le-glutathione emzimbeni wakho ukuthatha izithasiselo ze-glutathione. Lezi zengezo zingathathwa ngomlomo noma ngemijovo. Zisiza kakhulu kubantu okuqinisekiswe ukuthi banokushoda kwe-glutathione. Izithasiselo ziyatholakala ngesimo okhilimu ngenkathi ezinye zenzelwe isicelo se-(intravenous) IV.
Yini ebangela ukuntuleka kwe-glutathione?
Ukushoda kwe-Glutathione ikakhulukazi kwenzeka ngenxa yezici ezahlukahlukene. Enye inqubo yokuguga. Izinga lakho le-glutathione liqhubeka lincipha njengoba ukhula. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukukhiqizwa kwe-glutathione emangqamuzaneni omzimba womuntu kunciphisa isilinganiso samaphesenti ayishumi njalo eminyakeni eyishumi kumuntu osethole noma wedlula iminyaka engama-10.
Isici sesibili ukungondleki kahle. Ukwehluleka ukudla inani elifanele lokudla okunama-glutathione (ukudla okuyisikhombisa kuya kwayisishiyagalolunye kwama-veggies e-organic nezithelo nsuku zonke) kuholela ekuhlinzekeni okuphansi kwe-glutathione emzimbeni wakho.
Ezinye izinto ezinomthelela ekushoneni kwe-glutathione zifaka ingcindezi engapheli, ukukhathazeka, ukudangala, ukuzivocavoca umzimba ngokweqile nokungcoliswa kokukhanya. Ukuchayeka ezintweni ezinobuthi neziyingozi njengama-acetaminophen, isibulala-zinambuzane, ama-benzopyrenes namakhemikhali ezindlini nakho kungenye into.
Ingabe ikhona imiphumela emibi ye-glutathione?
Kuze kube manje, abukho ubufakazi obanele besayensi imiphumela emibi ye-glutathione. Noma kunjalo, okunye ukubuyekezwa kwabasebenzisi kusikisela ukuthi imiphumela emibi ye-glutathione ingaba khona, kepha ezimweni ezingandile. Ngokusho kokubuyekezwa, kwezinye izimo, umuntu angathola ama-cramps, ama-rashes noma aqhume ngemuva kokuthatha izithasiselo ze-glutathione. Ngenhlanhla, iningi lale miphumela ye-glutathione imnene futhi iyanyamalala ngemuva kwesikhashana esifushane.
Uma unesifo somoya (asthmatic), kungakuhle ukuthi ugweme ukuminza okuphefumile. Ukusebenzisa le ndlela ye-glutathione kungabangela ukusabela komzimba emzimbeni wakho. Futhi, abesifazane abakhulelwe nabancelwayo bayelulekwa ukuthi basebenzise izithasiselo ze-glutathione ukugwema imiphumela emibi kakhulu ye-glutathione.
Isimo samanje nesicelo se-Glutathione emakethe
I-Glutathione itholakala njenge-Rededu Glutathione (GSH) noma i-Oxidized Glutathione (GSSG) emakethe. Iziphathimandla zokulawula izidakamizwa ezisemthethweni ziye zavuma ukuthengiswa nokuthengwa kwazo zombili izinhlobo ze-glutathione, kodwa ngaphansi kwemigomo nemibandela ethile.
I-Glutathione powder inezinhlelo eziningi zezicelo. Ngaphandle kokusetjenziswa emithini yemithi, abakhiqizi abaningi benza i-glutathione powder bayithenga ukuyisebenzisa njengesithako esikhulu ekudleni, imikhiqizo yezempilo nezimonyo.
Ungathola ekudleni okune-glutathione okucebile ngakho emakethe yemvelo yangakini noma engadini. Uma ufuna i-glutathione powder noma i-glutathione supplements, noma okhilimu be-glutathione, amaphilisi, izixazululo, amaphilisi, isiraphu noma isipuni, ungazithola esitolo sakho sezidakamizwa sendawo noma esitolo esisebenza ngezithako zokudla endaweni yakini.
Kodwa-ke, indawo elula kakhulu yokuthola i-glutathione powder noma i-glutathione supplements iku-inthanethi. Kukhona izitolo eziningi zokuthenga izidakamizwa eziku-inthanethi noma ezitolo ongathembela kuzo ngokuthenga okungatheni kwe-glutathione. Kodwa-ke, udinga ukuqinisekisa ukuthi usebenzelana nomthengisi othembekile we-inthanethi ngaphambi kokuba imali ishintshe izandla. Lokhu kuyasebenza noma ufuna ukwenza a glutathione powder uthenge.
I-Glutathione iyinto ephumelelayo yokulwa nokuguga esiyidingayo emizimbeni yethu. IGlutathione idedela izinto ezinobuthi emizimbeni yethu futhi ibambe iqhaza elibalulekile ekunciphiseni noma ekubuyiseleni inqubo yokuguga. Inikeza ngezinzuzo eziningi zezempilo, kufaka phakathi ukuvimbela umdlavuza nokukhululeka kwesifo sikaParkinson. Ungathola i-glutathione ekudleni okuthile noma kusuka kuma-supplements e-glutathione powder atholakala ezitolo zomzimba nezokudla ezikuleli online.
I-Glutathione Iprotheni emzuzwana enamamidi acid amathathu, okuyi-cysteine, glutamate kanye ne-glycine. Lo mbhalo ugxile kakhulu izinzuzo ze-glutathione, ukusetshenziswa, imiphumela emibi nomthamo. Uzobona nokuthi ungayitholaphi i-glutathione.
Deponte, M. (2013). I-Glutathione catalysis kanye nendlela yokusabela yama-enzymes ancike ku-glutathione. I-Biochimica et Biophysica Acta (BBA) -Izikhalazo zeGeneral, 1830(5), i-3217-3266.
UNoctor, G., Mhamdi, A., Chaouch, S., Han, YI, Neukermans, J., Marquez ‐ Garcia, BELEN,… & Foyer, CH (2012). I-Glutathione ezitshalweni: ukubuka konke okuhlangene. Isitshalo, iseli nendawo ezungezile, 35(2), i-454-484.
U-Owen, JB, kanye neButterfield, DA (2010). Ukulinganiswa kwesilinganiso se-oxidized / minimated glutathione ratio. In Amaphrotheni enza iphutha futhi ukucindezelwa kwamaselula okugula nokuguga (pp. 269-277). IHumana Press, Totowa, NJ.
I-Ribas, V., García-Ruiz, C., kanye neFernández-Checa, JC (2014). I-Glutathione ne-mitochondria. Frontiers ekhemisi, 5, 151.
Smeyne, M., & Smeyne, RJ (2013). Isifo se-Glutathione metabolism kanye nesifo sikaParkinson. I-Radical Biology ne-Medicine, 62, I-13-25.
Traverso, N., Ricciarelli, R., Nitti, M., Marengo, B., Furfaro, AL, Pronzato, MA,… & Domenicotti, C. (2013). Indima ye-glutathione ekuqhubekeni komdlavuza kanye ne-chemoresistance. Umuthi we-Oxidative kanye nokuphila isikhathi eside kwamaselula, 2013.
ISIQONDISO SEPHAKATHI (70-18-8)
2.Usebenza kanjani uGlutathione?
3.Yini imihlomulo yeGlutathione emzimbeni?
4.Badinga ubani uGlutathione? Uyini umthamo ojwayelekile?
5.Ungayikhulisa kanjani iGlutathione yethu?
6.Yini imbangela yokushoda kwe-glutathione?
7. Ngabe kukhona imiphumela emibi ye-glutathione?
Isimo samanje nesokusebenza kwe-Glutathione emakethe
9. Singamtholaphi uGlutathione?
Ama-NAD + Precursors in Aging: Indima Ye-(NR) yeNicotinamide Riboside Chloride Iqiniso ku-Anti-ukuguga